Dilal qorsheysan oo Muqadisho laga fuliyay iyo shacabkaoo cabsi la soo daristay - Muqdisho Online. Caasimada Muqdisho
Home Wararka Dilal qorsheysan oo Muqadisho laga fuliyay iyo shacabkaoo cabsi la soo daristay
Dilal qorsheysan oo Muqadisho laga fuliyay iyo shacabkaoo cabsi la soo daristay
Waxaa habeenadii u danbeeyay ku soo badanayay magalaada Muqadisho dilal qorshysan oo dad shacab ah lagu dilay. Kooxo hubeysan ayaa xalay fiidkii hore dil iyo dhaawac ka geystay gudaha degmada Dharkeenley ee Gobolka Banaadir, waxaana kasoo baxaya warar kala duwan. Dad Goobjoogayaal oo ku sugnaa goobta dhibka ka dhacay ayaa sheegay in Dilka loo geystay Wiil dhalinyaro oo kamid ahaa dadka deegaanka Xaafadda Macallin Nuur, iyadoo wiilka rasaas looga dhuftay qeybaha sare ee jirka.
Dhanka, sida la xaqiijiyay kooxdii falka dilka ah geystay ayaa waxaa kaloo lasheegay inay dhaawaceen qof dumar oo ku sugneyd Xaafadda Tawakal ee Macallin Nuur, waxaana la geeyay Xarun Caafimaad oo ku taalla Muqdisho. Ragii ka dambeeyay dilka iyo dhaawaca ayaa isla xiligaas goobta ugu baxsaday luuq yar oo halkaas ku yaalla, waxaana la sheegay in markii dambe ee goobta tageen Ciidamo ka tirsan kuwa Booliska Soomaaliya.
Xaaalada Muqadishu ayaa aad iyo aad uga soo daraysa yada oo qaybo ka mida Muqadisho, gaar haan dedmooyinka Kaaraan, Yaaqshiid iyo Deyniile ay dadku bilaabeen in ay hubkooda banaanka ula soo bxaaan.
Previous articleWar deg-deg ah: Gaari ay la socdeen shacab oo lagu qarxiyey duleedka Muqdisho
Next articleShan QODOB oo caddeyn u ah in KHEYRE iyo Farmaajo aysan isku mowqif ka ahayn hadalkii ra’iisul wasaaraha